amakhoyili wokugcoba okufakelwa ugesi, ama-coil, ama-coil manufacturer
Ikhaya / Amakheyili Ukushisa Ukushisa / Amakhoyili we-Induction Brazing
Isigaba: Amakheyili Ukushisa Ukushisa Tags: ikhoyili yebhere, umakhi wezinsimbi zamabhayili, ibhande lokushisa lokushisa, Amakhoyili, Umkhiqizi wamakhoyili, Izinhlamvu ze-HF zebhande, ikhoyili ye-brazing ephezulu, Amakhoyili E-Induction Brazing, coil induction, ukufakwa kwezingxenye zokushisa, inductor induction, inductors
Ukwakhiwa kwamakhoyili we-Induction Brazing ye-electrical induction brazing heat, system, machine and induction soldering machine, izinkinobho zokubhakanyiswa kwe-induction, njll.
Kungakhathaliseki ukuthi ubujamo, ubukhulu, noma isitayela coil induction udinga, singakusiza! Nazi ezinye ezimbalwa zamakhemikhali wekhoyili esisebenze nawo. Amakhoyili we-pancake, amakhoyili we-helical, amakhoyili we-concentrator ... i-tubing yesikwele, eyindilinga neyodwa emigqumeni ... Ijika elilodwa, i-turn-five, eliyishumi nambili-jikela ... ngaphansi kwe-0.10 "ID kuya kwe-ID ye-5 '... ngokushisa kwangaphakathi noma kwangaphandle. Kungakhathaliseki ukuthi izidingo zakho, sithumelele imidwebo yakho kanye nezichasiselo ze-quotation esheshayo. Uma usanda kushayela ukushisa, usithumelele izingxenye zakho ukuthola ukuhlolwa kwamahhala.
I-coil yokungeniswa ixhaswe nge-tooling efanele ejwayele ukubeka impumelelo noma ukwehluleka kwese system.
Ukwakhiwa kwe-Coil Design Coil
Eyenziwe nge-tubing noma ipulasitiki ephethe kahle kakhulu, ukuklanywa kwe-coil ye-induction kuthonywa uhlelo lokusebenza, ukukhethwa kwamaningi, amandla omzimba kanye nesikhathi sokushisa. Inhloso ye-coil yokufakelwa ukudala iphethini le-magnetic flux ukudala indlela yamanje emkhatsini womsebenzi ukushisa ngokufudumele indawo yomhlangano ozokhishwa.
The Ikhoyili ye-Induction kumele kube kahle emhlanganweni ukuvumela ukushisa okudingekayo kufezeke. Umkhawulo womoya noma isikhala sokuhlanganisa phakathi komsebenzi womsebenzi ngaphakathi nangaphakathi kwekhoyili kufanele kuncishiswe ngenxa yezizathu zokusebenza kahle. Izikhala ezijwayelekile zokuklama ye-0.125 intshi (3.175 mm) kuya ku-0.250 intshi (6.350 mm) zinengqondo ngokukhanda nge-coil ye-helical.
Izigaba ezingenakubalwa zingahle zidinge izimvume ezengeziwe ezidinga amandla engeziwe ukuze kunqobe lokhu okusebenza kahle kokuhlanganiswa okungalungile. Lezi zimo zihlanganisa izimo lapho kubonakala khona ikhoyili eyindilinga enomkhawulo omkhulu we-air noma i-coil engeyona ehambelayo ukuze ufinyelele endaweni yesibhakabhaka.
Indawo yokushisa inquma ubude bekhoyili yokufakelwa. An coil induction ukuthi mfushane kakhulu kuzodinga isikhathi esiphezulu sokushisa ukuvumela ukushisa, ngokuqhuba, ukumboza indawo. An ukufakwa kwe-coil yokushisa lokho kukhulu kakhulu kuzotshisa insimbi eningi kunesidingo, ngakho-ke ngeke kusebenze kancane. Umshini wokushisa we-HLQ Co unemiklamo eminingi ekhethekile ye-inductors yokushisa okusetshenziselwa indawo, nama-coil akhanyisa kahle ngaphandle kokuzungeze ucezu lomsebenzi.